Kuthetha ukuthini ukuphupha indlu? Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ukufikelela kuzinzo kuzo zonke iinkalo zobomi kuhlala kuyinto entle kubo bonke abantu. Ukuphupha nje ngendlu kunokuba nakho ukubonakalisa izikhombisi ezinxulunyaniswe neminye imiba ebalulekileyo. Enye indlela okanye enye, eyona nto ibalulekileyo kukuhlala uzolile kwaye uqonde ukuba yonke into ebomini iyenzeka.
Kungaphezulu kokulingeneyo ukukhankanya ukuba ngokwezezimali ubomi bakho bunokuba bungcono kwaye uyazi nendlela yokuphucula. Ukuba iziphumo ezinqwenelekayo zahlukile, kuyakufuneka utshintshe indlela ojongane ngayo nobomi bakho. Into ebaluleke kakhulu kuwe kukuqonda ukuba ngamanye amaxesha utshintsho luyimfuneko.
1 Intsingiselo yokuphupha malunga nendlu
2 Iphupha lokuthenga indlu
3 Ukuphupha ubona okanye ukuba kwindlu yakho
4 Iphupha lendlu eshiyiweyo
5 Iphupha lendlu encinci nelula
6 Ukuphupha kwendlu kwakukukhulu kwaye kufanelekile
7 Iphupha lendlu entsha neqaqambileyo
8 Iphupha malunga nendlu esetyenzisiweyo
9 Iphupha malunga nendlu yegumbi eliphezulu
10 Ukuphupha kwendlu kwimodeli ...
11 Iphupha lokuhlala phesheya
12 Ngaba iphupha liqinisekile okanye alilunganga?
Intsingiselo yokuphupha malunga nendlu
Zizalathiso ezinxulumene nomba wakho wothando, ke izinto ziya kuqala ukwenzeka. Khawukhumbule nje ukuba kufuneka ube nesimo sengqondo ukuze yonke into ihambe kakuhle. Ngamanye amaxesha ukuxhalaba kwakho kunokukwenzakalisa kwaye oku kuhlala kuyinto eyingozi kakhulu
Ukuphupha kwendlu kubonisa isidingo esikhulu sokujonga ngakumbi iimvakalelo zakho. Olu hlalutyo luya kuba nethuba elihle lokuvela kwiinkalo ezahlukeneyo zobomi. Yiyo kanye le ngcinga eya kukuzisela izibonelelo ezinomdla.
Iphupha lokuthenga indlu
Isebenza kakuhle ngokunxulumene nomhlaba wakho wezezimali, oko kukuthi, kunokwenzeka ukuba kubekho izibonelelo endleleni. Eyona nto ibaluleke kakhulu kukuba uqaphele xa usayina ezinye iikhontrakthi okanye izibophelelo. Lungiselela kwaye ucinge ngaphambi kokwenza nasiphi na isigqibo, kuba iyakuba sesona sigqibo silungileyo.
Ukuphupha ubona okanye ukuba kwindlu yakho
Ukufumana uzinzo kubudlelwane bakho kubalulekile kwaye ukuba neli phupha kubonisa le meko. Lifikile ixesha lokonwabela uthando lwakho ngakumbi okanye lokulungiselela ukufika kokutsha, njengoko kuya kuba yimfuneko. Ngelixa ukhalazayo, indalo iphela ikwindawo yakho kwaye kufuneka uthathe eli thuba.
Iphupha lendlu eshiyiweyo
Akukho luncedo ukujonga elidlulileyo, kuba eyona nto kugxilwe kuyo yeyangoku nokwakha ikamva. Ukuphupha ngendlu eshiyiweyo kubonisa isidingo sokushiya ixesha lakho elidlulileyo kwindawo eliyifaneleyo. Eyona nto iphambili kuwe kukufunda ukuqaphela ezi meko zilungileyo.
Iphupha lendlu encinci nelula
Ixesha lifikile lokuba wenze ikamva lakho, kuba oku kuyakuba ngumahluko omkhulu kubomi bakho. Kuba kuyo yonke le meko, uya kuba nethuba lokucinga malunga neyona nto iyixabiso. Gcina ukhumbula ukuba eli nani liya kukunika ithuba elingcono lokuba ube nempumelelo obukade uyikhangela.
Ukuphupha kwendlu kwakukukhulu kwaye kufanelekile
Ukuthobeka kakhulu kwaye unobubele ngelishwa ayisiyonto intle kwaye kunokukwenzakalisa ngeendlela ezininzi. Ukuba uqala ukucinga ngakumbi ngawe, uya kuqonda ukuba esi yayisesona sigqibo silungileyo kuwe. Ixesha elingaphezulu, uyakuqonda ukuba ukuba awucingi ngesiqu sakho, akukho namnye oya kukwenza.
Iphupha lendlu entsha neqaqambileyo
Uninzi lweemilo zakho ziya kuphumelela kwaye ngelishwa awukwenzi konke ngendlela eyiyo. Kuba ngamanye amaxesha uyakhalaza kwaye ngelixa usenza, abanye abantu bayasokola kwaye bafezekise iinjongo. Eli lixesha lokuba wohluke, ungakhalazi kwaye ngaphezulu kwako konke uqonde ukuba yonke into iyimfuneko.
Iphupha malunga nendlu esetyenzisiweyo
Nokuba inokubonakala ngathi ayimfuneko, kubaluleke kakhulu ukuba uhlaziye ulwazi lwakho. Ukuthatha iikhosi ezintsha kubalulekile kuba kuyakuvumela ukuba ufunde izinto ezintsha kwaye kulungile kakhulu. Gcina ukhumbula ukuba esi iya kuba sisihloko esiphambili kwaye siya kukuzisela izibonelelo ezininzi.
Iphupha malunga nendlu yegumbi eliphezulu
Ngexesha elifutshane kakhulu uyakufikelela kwincopho yobungcali, oko kuthetha ukuba ngumcimbi wexesha kuphela. Ukuphupha i-attic yinto enkulu yokuba kunokwenzeka ukuba unyuselwe. Sebenzisa eli thuba, lenze ukuba lenzeke kwaye ungacingi ngento enokwenzeka.
Ukuphupha kwendlu kwimodeli ...
Ngelishwa izicwangciso zakho azisebenzi kakuhle kwaye uxanduva lolwakho. Ujonge kakhulu kwabanye kwaye ulibale eyona nto iphambili, oko kukuthi, wena kunye nokhetho lwakho. Eli lixesha lokuthatha isigqibo kwaye eyona nto intle kakhulu kukwazi ukuba nokuba woyisiwe, ungafunda into.
Iphupha lokuhlala phesheya
Yinto enkulu kwaye unethuba lokuhamba ngaphandle kwexesha. Eli lixesha lokuthatha umngcipheko kwaye wonwabele amaxesha osapho, kuba indawo iya kuba lelinye lamaphupha akho.
Ukuphupha ngendlu kulungile kuba kubonisa ukuba ukwindlela elungileyo kwaye nokuba yinto embi, kukuwe ukuba wenze ukulungiswa. Lo mbuzo uza kwenza umohluko kwaye uzise amava okufunda aya kuba yinzuzo kuwe. Okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho, ikamva lakho kunye nekamva lakho liya kuxhomekeka kuwe kuphela.